Cannelloni gratin miaraka amin'ny tofu sy holatra | Bezzia
Tofu sy holatra gratin cannelloni
Maria vazquez | 04/05/2021 10:00 | Nohavaozina amin'ny 29/04/2021 20:17 | paty
Androany ao Bezzia dia manamboatra fomba fahandro cannelloni nentim-paharazana a sakafo vegan. Ny vokatr'izany dia ireto tofu sy gratin cannelloni holatra ireto izay tsy ampiharin'ireo sary. Crispy cannelloni ety ivelany miaraka amin'ny famenoana matsiro be.
Tongolo, dipoavatra, karaoty, holatra ary tofu, izany no akora famenoana. Famenoana azonao atao koa miomàna miaraka amin'ny proteinina legioma hafa toy ny tempe, soja soavaly na pitipoà voaravaka endrika hanome ohatra vitsivitsy, mba tsy hiteraka anao.
Ary mba hamoronana lovia hafa isanandro dia afaka milalao saosy ihany koa ianao. Gratin azy ireo miaraka amina fromazy vegan kely no ilainao hanompo lovia tsara, fa raha manampy koa ianao saosy vita amin'ny ronono voanio toa an'ity na vegan béchamel ... folo ny valiny. Sahy manomana azy ireo ve ianao?
1 Akora ilaina amin'ny 12-14 cannelloni
Akora ilaina amin'ny 12-14 cannelloni
Tongolo kely 1, notetehina
Karaoty 2, voatetika
1/2 sakamalao lakolosy maitso, voatetika
1/2 dipoavatra lakolosy mena, voatetika
Holatra 10, voatetika
200 g. tofu, voatetika
Puree voatabia 4 sotro fihinanana
Mametaka voatabia 1 sotrokely
Paprika 1/2 sotrokely (mamy sy / na masiaka)
14 lovia ny cannelloni
Ho an'ny saosy
Ronono voanio 3 vera
Sira sy dipoavatra mba hanandrana
80 g. fromazy veganina namboarina izay afaka mitsonika tsara
Ao anaty lapoaly misy menaka roa sotro asehoy ny tongolo, ny dipoavatra sy ny karaoty mandritra ny 8 minitra.
dia ampio ny holatra sy tofu ary mahandro minitra vitsy mandra-loko miloko ny holatra.
Ampio ny voatabia, afangaro ary mahandroa roa minitra hafa mba hahavery ny ampahan'ny rano ao aminy.
Vita ny fanomanana ny famenoana, sira sy dipoavatra mba hanandrana, ampio ny paprika ary afangaro.
Andrahoy izao ny lovia cannelloni ao anaty vilany misy rano masira betsaka manaraka ny torolalan'ny mpanamboatra azy.
Rehefa masaka sy raraka, asio sotro famenoana amin'ny tsirairay amin'izy ireo, mihodinkodina ary apetraho ao anaty lovia iray na mihoatra ny fatana ny cannelloni.
Rehefa vita ianao, amboary ny saosy manafana ny ronono voanio miaraka amin'ny voanjo, sira, dipoavatra ary antsasaky ny fromazy ao anaty vilany, mandra-pahatongan'ny fampidirana azy.
Arotsaka ny antsasaky ny saosy apetaho amin'ny cannelloni, aparitaho ny ambiny fromazy ary arotsaho aminy ny saosy sisa. Ny saosy dia tsy mila manarona ny cannelloni, fa tokony hahatratra 2/3 farafahakeliny ny haavony.
Ento any amin'ny lafaoro efa voafana ary gratin mandritra ny 10-15 minitra na mandra-pahatongan'ny volamena.
Arotsaho ny tofu mafana sy gratin cannelloni gratin.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » fomba fanamboarana » paty » Tofu sy holatra gratin cannelloni
Fomba 5 handaminana ny fanangonana ny bokinao
Ahoana ny fanovana ny trano fidianao amin'ny fomba mora